Qaaqni Saxaaxa Kasaa jedhu akka kasaalee gabatee ammaaf gulaaltu si gargaara.
Foddaa faayilii kuusaa deeta keessaa, sajoo Gabatee cuqaasi. Saaguu - Gabatee Saxaxa yookin Gulaali - Gulaalifili
Kasaalee jiran agarsiisa.Kasaa tarree keessaa filadhu gulaaluuf. Gadi fageenya kasaa filamee qaaqa keessatti argama.
Kasaa haaraa uuma.
Kasaa ammaa haqi
Kasaa ammaa haqi.
Kasaa ammaa maqaa haaraa baasi
Kasaa ammaa maqaa haaraa baasi.
Kasaa ammaa olkaa'i
Kasaa ammaa madda deetaa keessatti kuusi.
Kasaa ammaa haaromsi
Qindaa'noota yeroo qaaqni eegalu qabutti kasaa ammaa haaromsa.
Akkuma liixaa kasaa ammaa jijjiirtee fi san booda kasaa biraa yoo filatte, jijjiiramni yeruma sana gara madda deetaatti dabra. Qaaqa qofa dhiisuu, ykn kasaa kan biraa filachuu, yoo jijjiiramni guutumaa guutuutti madda deetaan galateeffame. Ta'ullee, sajoo Kasaa Ammaa Haaromsi jedhu cuqaasuun jijjiirama gara dura turetti deebisuu dandeessa.
Kasaan ammaa gatii addaa qofa ykn kan biraa adda baasuu isaa agarsiisa. Filannoo Addaa mirkaneessuun deetaan al lama akka dirreetti hin galchinee fi amanamuummaa deetaa mirkaneessa.
Iddoon Dirreewwan jedhu tarreewwan dirree gabatee ammaa keessa jiran agarsiisa. Yoo barbaadde dirreewwan hedduu filachuu dandeessa. Dirree filannoo irraa balleessuuf, jalqaba tarree irratti galcha duuwwaa filADHU.
Gabatee ammaa keessaa dirreewwan tarree agarsiisa. Dirree tokkoo ol filachuu dandeessa.
Title is: Saxaaxa kasaa